हाम्रो राष्ट्रवाद : भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण, नेपालमा गाडी तोडफोड ! (भिडियोसहित) – Agrimpost
मुख्य पृष्ठभिडियो समाचारहाम्रो राष्ट्रवाद : भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण, नेपालमा गाडी तोडफोड ! (भिडियोसहित)
हाम्रो राष्ट्रवाद : भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण, नेपालमा गाडी तोडफोड ! (भिडियोसहित)
बिहीबार बिहान ११ बजे कुपण्डोलस्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर एक हुल निस्कियो । लामो कपाल, कम्ब्याट ड्रेस लगाएका एक आक्रोशित युवाको नेतृत्वमा निस्किएको उक्त जुलुसमा कलेज ड्रेस लगाएका करिब एक दर्जन विद्यार्थी पनि सामेल थिए । उनीहरुले ‘लिपुलेक हाम्रो हो’, ‘लिपुलेक फिर्ता गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए । जब कुपन्डोल–पुल्चोक सडक खण्डमा उनीहरु आइपुगे, सरकारी सवारी साधन देख्नासाथ उनीहरु तोडफोडका लागि तम्सिहाले ।
उनीहरुसँगै तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरु भने सवारी साधन व्यवस्थापन र उनीहरुलाई उत्तेजित हुनबाट रोक्न प्रयास गरिरहेका देखिन्थे । केही बेर सडकमा प्रदर्शन गरेका उनीहरुले अन्य सरकारी गाडीलाई पनि निशाना बनाएका थिए । प्रदर्शनका कारण केही बेर सवारी अवागमन समेत अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरुले केही सरकारी सवारी साधन तोडफोड भएको र प्रहरीले तत्कालै स्थिति नियन्त्रणमा लिएको राईले बताए । भारतले नयाँ नक्सामार्फत नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेपालका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भइरहेको छ । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरु भारतीय कदमको विरोधमा उत्रिएका हुन्। विद्यार्थी संगठनहरुले बिहीबार विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेका छन् ।